MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: မရေမရာ ဖြစ်သွားသော KIO နှင့် အစိုးရ ဆွေးနွေးပွဲ
ဤသို့ကြောင့် ဆွေးနွေးပွဲသည် တရားဝင် ဆွေးနွေးပွဲမှ အလွတ်သဘော ဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်သွား ပါသည်။ KIO သည် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးရန် အဓိက တောင်းဆိုနေပြီး အစိုးရ ဘက်ကမူ မြစ်ကြီးနား-ပူတာအို လမ်းကို လုံခြုံ ရေး၊ တာပိန် ရေအား လျှပ်စစ် စီမံကိန်း ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ပြုလုပ်ခွင့် ပေးရန်၊ ကချင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ စစ်ဘေးကြောင့် နေရပ်စွန့်ခွာ ထွက် ပြေး နေရသူများကို ၂ ဖက် ပူးပေါင်း ကူညီ ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် နှစ်ဦး နှစ်ဖက် စစ်ရေး အရှိန် လျှော့ချရန် တောင်းဆို ခဲ့ပါသည်။
“အပစ်အခတ် ရပ်စဲပြီး နိုင်ငံရေးအရ မပြေလည်ရင် စစ်ဆိုတာ ထပ်ဖြစ် မှာပဲ။ အဲဒါကြောင့် စစ်ရေး နည်းလမ်းနဲ့ ဖြေ ရှင်းတာ မဟုတ်ပဲနဲ့ နိုင်ငံရေး နည်းလမ်းနဲ့ပဲ ဖြေရှင်းပေးဖို့ ကျနော်တို့ ထပ်မံ တောင်းဆိုပါတယ်” ဟု ကချင် လွတ် မြောက်ရေး အဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ် ဦးဆွမ်လွတ်ဂမ်က ဆွေးနွေးပွဲ၌ တင်ပြခဲ့ပါသည်။
ဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်သော အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်များမှာ-
၁။ ဦးအောင်မင်း (ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ နှင့် ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး၊ သမ္မတရုံး ၀န်ကြီးဌာန)
၂။ ဦးဝင်းထွန်း (ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာ ၀န်ကြီးဌာန)
၃။ ဦးအုန်းမြင့် (ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး၊ မွေး/ရေ ၀န်ကြီးဌာန)
၄။ ဦးစ၀်အောင်မြတ် (ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်)
၅။ ဦးလဂျွန်ငန်ဆိုင်း (ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်)
၆။ ဗိုလ်မှူးချုပ်ထွန်းထွန်းနောင် (မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး)
၇။ ဗိုလ်မှူးချုပ် အောင်စိုး (အရှေ့မြောက်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး)
၈။ ဦးထွန်းထွန်းဦး (ဒုတိယ-ရှေ့နေချုပ်)
၉။ ဗိုလ်ချုပ် ဇော်ဝင်း (ဒု-၀န်ကြီး၊ နယ်စပ်ရေးရာ ၀န်ကြီးဌာန)
၁၀။ ဗိုလ်မှူးကြီး သန်းအောင် (ကချင်ပြည်နယ် နယ်/လုံဝန်ကြီး)
၁၁။ ဗိုလ်မှူးကြီး အောင်သူ (ရှမ်းပြည်နယ် နယ်/လုံဝန်ကြီး)
၁၂။ ဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်စိုးဝင်း (ကာချုပ်ဦးစီးရုံး) တို့ဖြစ်ပါသည်။
KIO ဖက်မှ တက်ရောက်ကြမည့် ဗဟို ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရေး အဖွဲ့ဝင်များမှာ-
၁. ဦးဆွမ်လွတ်ဂမ် (အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်)
၂. ဦးလဖိုင်လ (အဖွဲ့ဝင်)
၃. ဦးဇော်ရော် (အဖွဲ့ဝင်)
၄. ဦးခွန်နောင် (အဖွဲ့ဝင်)
၅. ဦးဂျီးနောင် (အဖွဲ့ဝင်)
၆. ဦးဇော်တောင် (အဖွဲ့ဝင်)
၇. ဦးနော်ထွယ် (အဖွဲ့ဝင်)
၈. ဦးခွန်ဆိုင်း (အဖွဲ့ဝင်)
၉. ဦးဆိုင်းခေါ (အဖွဲ့ဝင်) တို့ တက်ရောက်ပါသည်။
၁၀၅ မမ ပစ်မိန့်ကို ကက(ကြည်း)ကသာ အမိန့် ပေးနိုင်သည်ဟု ဦးအောင်မင်းက ဆိုပါသည်။ ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး (KIO) ကိုယ်စား လှယ်က “ဒီလထဲမှာတင် တိုက်ပွဲပေါင်း (၉၀) ကျော်ဖြစ်ထားတယ်၊ ၁၀၅ ကို ကက (ကြည်း) က ပစ်မိန့်ရ မှ ပစ်ရတယ် ဆိုတာကို အခုမှ သူသိပါ တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလ ၂၄ ရက်နေ ၂၈ ကြားမှာ KIO ကို ဗဟိုဌာနချုပ်ကို ၁၀၅ နဲ့ ၁၄ ကြိမ် ပစ်တာ ခံခဲ့ရပါတယ်” ဟု တင်ပြ သွားပါသည်။
အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်သည် မကြာမီ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲကို ကျင်းပ နိုင်ရန် ဆန္ဒရှိပြီး ပြည်တွင်း၌ ဆွေးနွေး သွားရန် တင်ပြ သွားပါသည်။ KIO သည် အစိုးရ၏ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး၊ ပြည်ထောင်စု အဆင့် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးရေးနှင့် လွှတ်တော်တွင်း ဆွေးနွေးရေး စခန်းဆင့်များ ကို လက်မခံကြောင်း ပယ်ချ ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ကချင် လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (KIA) သည် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်း ချမ်းရေး ကော်မတီ ဦးအောင်သောင်းတို့နှင့် တ ရားဝင် (၃) ကြိမ်တိုင် ဆွေးနွေး ခဲ့ပြီးသော်လည်း ရလာဒ်ကို ဦးအောင်မင်းတို့၏ အလွတ် သဘော တွေ့ဆုံပွဲဖြင့် လက်မခံ ပယ်ချခဲ့ပါသည်။ ဦးအောင်မင်းတို့နှင့် သုံးကြိမ်တိုင် အလွတ်သဘော တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စု အဆင့် တွေ့ဆုံမှုမှာ ယခုအကြိမ် ပထမဆုံးဖြစ်ပါသည်။
at 10/31/2012 03:17:00 AM